‘बाघी २’ को ‘ओ साथी’ बोलको गीत सार्वजनिक (हेर्नुहोस् भिडियो)::kamananews
‘बाघी २’ को ‘ओ साथी’ बोलको गीत सार्वजनिक (हेर्नुहोस् भिडियो)
बलिउड चलचित्र ‘बाघी २’ को ‘ओ साथी’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ ।
उक्त गीतमा टाइगर श्रोफ र दिशा पटानीलाई रोमान्टिक मुडमा देख्न सकिन्छ ।
यस फिल्मको पहिलो भाग ‘बाघी’मा टाइगरको साथमा अभिनेत्री शारदा कपूर देखिएकी थिइन् भने बाघी २ मा टाइगर श्रफको साथमा दिशा पटानी देखिएकी छिन् । फिल्म युनिटले बाघी २ प्रर्दशन नहुँदै बाघी ३ को निर्माण घोषणा पनि गरिसकेका छन् ।
शुक्र, फाल्गुन २५, २०७४ मा प्रकाशित
विदेशी फिल्म बाट अन्य
को हुन् सामाजिक संजालमा रातारात छायकि प्रिया प्रकाश वेरियर??
उनको आगामी फिल्म Oru Adar Love देखि गीत मनीक्य मलेरिया पोवी मा 18 वर्षीय मलयालम अभिनेता प्रिया प्रकाश वारियर को प्यारा पनी, सामाजिक मीडिया मा एक विशाल अनुभूति भएको छ। नयाँ ‘अभिव्यक्ति रानी’ को...
सधैंका लागि ‘पद्मावति’ को प्रदर्शन रोक्न करणी सेनाको माग
एजेन्सी, ७ पुस । निर्देशक सञ्जयलीला भन्साली यतिबेला ठूलो तनावमा छन् । साढे दुई अर्बभन्दा बढी लगानीमा निर्मित आफ्नो पिरियड फिल्म ‘पद्मावति’ रिलिजअघि नै विवादमा परेपछि उनी तनावमा परेका हुन् । ‘पद्मावति’ १ डिसेम्बरमा रिलिज...
कपिललाई दर्शकको लात, ‘फिरंगी’ फ्लप
नयाँदिल्ली– कपिल शर्माको ‘फिरंगी’ शुक्रवार रिलिज भयो तर बक्स अफिसमा यसे निराशाजनक व्यापार गर्यो कि कपिल शर्मा समेत सञ्चारमाध्यामको सम्पर्क बाहिर पुगेका छन् । तीन दिनमा उनको फिल्मले जम्मा ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ...
भारतीय फिल्म ‘पद्मावती’ को चर्को विरोध – फिल्म विरुद्ध भारतभर जुलुस निकालिने
एजेन्सी, काठमाडौं, ३० कात्तिक । संजयलिला भन्सालीको फिल्म ‘पद्मावती’ लाई लिएर भइरहेको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । भारतमा यो फिल्मको व्यापक विरोध भइरहेको छ । फिल्मकी हिरोइन दीपिका पादुकोणले फिल्म रिलिज भएरै छाड्ने बताएकी छन् । दीपिकाको...
सलमान र एश्वर्याको भिडन्त – कसले मार्ला बाजी ?
काठमाडौं, २५ कात्तिक । बलिउड अभिनेता सलमान खान र उनकी पूर्व प्रेमिका तथा अभिनेत्री एश्वर्या राय वच्चन एकअर्कासँग भिड्ने भएका छन् । यी दुईलाई एकसाथ फिल्ममा हेर्ने धेरैको चाहना भएपनि त्यो भने पुरा हुन सकेको...
सती प्रथालाई बढावा दिएको भन्दै भन्सालीको ‘पद्मावती’ विरुद्ध अदालतमा मुद्धा
कात्तिक २४ – सञ्जय लीला भन्साली निर्देशित चलचित्र ‘पद्मावती’ सुटिङको समयदेखि नै विवाद र चर्चामा रहेको छ । लगातार चलचित्रले कैयौं समुदायको विरोधको सामना गर्नु परेको छ । फिल्म सुटिङको बेलामै सेटमा आगलागी गरियो ।...
हलिउड निर्माता हार्बीमाथि यौन दुर्व्यवहारको अारोप – ओस्कार आयोजक आपतकालीन बैठक बस्दै
– बीबीसी, हलिउडका गन्नेमान्ने चलचित्र निर्माता हार्बी वाइन्सटिनमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेपछि ओस्कारका आयोजकहरुले उनको भुमिका अब के हुने भन्नेबारे आपतकालीन बैठक गर्दैछन्। ओस्कार अवार्ड विजेता हार्भी वाइन्सटिनमाथि तीनजना महिलालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ। मोसन पिक्चर...
बलात्कारको आरोपमा: भोजपुरी नायक मनोज पाण्डेय
२o७४ असोज ४ बुधबार नयाँ दिल्ली– भोजपुरी नायक मनोज पाण्डेयमाथि बलात्कारको आरोप लागेको छ। काम मिलाइदिने वहानामा आफूलाई बलात्कार गरेको आरोप एक गायिकाले लगाएकी छिन्। मनोजमाथि मुम्बईको चारकोप पुलिस विभागमा जबरदस्ती करणीको मुद्धा दायर भइसकेको छ। पुलिस...
यो हो २०१८ को सबैभन्दा ठूलो फिल्म, रिलिज अघि नै तोड्यो ‘बाहुबली–२’ को रकेर्ड
काठमाडौं, २८ भदौ । संजय लिला भन्सालीको आगामी फिल्म ‘पद्मावती’ रिलिज भन्दा अघिनै निकै चर्चामा आएको छ । फिल्मको काहानीका विषयमा भएको विवाद, रिलिज डेट सारिएको विषयमा चर्चा हुँदै आएका छन् । फेरि एकपटक यो...
हलिउडका कयौं रेकर्ड तोड्यो ‘इट्’ले, ३ दिनमै १८ अर्ब ४० करोड कमाइ
काठमाडौं, २७ भदौ । हलिउडका कयौं रेकर्ड तोडेर चलचित्र ‘इट्’ले तीन दिनमै १८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कमाएर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । गएको शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा डरलाग्दो मानिएको भूतको फिल्म ‘इट्’...